Ifektri Yemoto - Abakhiqizi Bezimoto baseChina, Abahlinzeki
Le modeli yeshaja yemoto yomoya ihlanza ikakhulukazi igumbi legumbi. I-ionic Air purifier enamandla ingadedela ama-ions afinyelela ezigidini ezi-5.6 nge-cm3 ngayinye, engasusa ngokushesha ukuhleleka okungalungile nephunga emotweni. La ma-ions we-high-density negative abuye afake uthuli, impova, nentuthu ukukhuphula izinga lomoya nokunciphisa iphunga nephunga. Isihlanza umoya sikhipha iphunga elikhanyayo le-ozone elinuka njengesihlambi semvula sasehlobo. Ion engemihle ekhishwayo inganciphisa iphunga. I-ozone isebenza kahle kakhulu ekuhlanzeni lapho isetshenziswa isikhathi esithile. Imoto yakho inuka kamnandi lapho isihlanza umoya semoto siqala.
Okubili 2.1 Izimbobo ze-USB zihlinzekelwa ukushaja okunamandla nokusheshayo kunoma iyiphi ifoni ephathekayo, ithebhulethi, namanye amadivayisi. Isesekeli semoto esifanele ukugcina ikhabethe lemoto lisha futhi likhanyisa ukushaja okusheshayo kokugibela imoto ende.
Yakhiwe ngesitayela, insimbi engagqwali ye-matte ene-crystal emise okwe-crystal eluhlaza okwesibhakabhaka, ingeza ukubukeka kwesimanje kwemfashini ngaphakathi kwemoto yakho, isiza umsebenzisi ukuthola okokuhlanza umoya namachweba e-USB ebumnyameni, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuthambile futhi kwandise umoya ku imoto. Iyunithi iyi-ionizer ethule enomsindo omncane.
Isihlanzimoyeni / Imoto / AP-C02
Le modeli yeshaja yemoto yomoya ihlanza ikakhulukazi igumbi legumbi. Ama-5.6 million pcs / cm³negions ions akhipha ukuhlanza umoya emotweni, i-99% isuse ngempumelelo ukungcoliswa kwezinhlayiya, izokuqinisekisa ukuthi uhambo oluhle. Futhi kubiza ifoni yakho namanye amadivayisi ukwenza uhambo lwakho lwemoto lube lula. Futhi ukwakheka okuhle namalambu okusebenza aluhlaza okwesibhakabhaka kujabulisa impela!
Lesi simisi somoya esihlanza kakhulu ukuhlanza ukungcoliswa komoya. Ihlunga ngempumelelo izinhlayiya ze-PM2.5, izinwele, impova, uthuli nezinye izinto zezinhlayiyana. I-activated carbon layer isusa iphunga nezinto ezinobungozi zamakhemikhali. Futhi kulandelwa ama-PC ayizigidi eziyi-12 / cm³negative ion ekhipha ukudala indawo yehlathi emotweni yakho. Vumela ingaphakathi lemoto yakho, umoya ohlanzekile yonke indlela.
Charm emkhathini amalambu aluhlaza okwesibhakabhaka, i-mini ambiance ray eluhlaza, hhayi ukukhanya, ukunethezeleka nokuthandana kakhulu. Akuyona into yokuhlanza umoya kuphela. Futhi engeza amaphilisi okunambitheka ukwenza imoto ibe nephunga elimnandi.
Uhlaka lwesitayela esimnyama-mpunga se-aluminium alloy lubukeka lunambitheka impela. Futhi izindlela ezi-2 zejubane zikhanyisa zombili ezithambile zothando, zakha umoya lapho kumnyama. Futhi ithebhulethi enephunga elimnandi izokwenza ukuthi uhambo lube mnandi kakhulu.
Ngaphansi kokubukeka okuhle, le modeli yomoya wokuhlanza inomsebenzi wokuhlanza onamandla, gxila ekuhlanzweni kwezimoto. Isihlungi sezinga le-13 + i-carbon esebenzayo + i-ion engakhiqizi ekhipha, isuse ngempumelelo izindaba eziyingozi, zonke izici zivikela impilo yakho.
Isihlanzimoyeni / Imoto / AP-C05
Le purifier yomoya inezinyathelo ezi-3 zokuhlanzwa, shintsha isihlungi samahhala, ikhabhoni esebenzayo nama-ions amabi ekhipha. Ingasusa kahle ama-99% amagesi wezinto eziyingozi emoyeni. Kanye nomsebenzi we-aromatherapy kuzokwakha igumbi elinephunga elinempilo elinempilo lemoto yakho.
Umklamo olula wesitayela nezinto ezinhle unikeza umuzwa wokunethezeka, umhlobiso omuhle futhi.
Isihlanzimoyeni / Imoto / AP-C06
Lesi sihlanzisi somoya esisesitayeleni ikakhulukazi esenzelwe imoto. Ungahle ungazi ukuthi kungasongela okungakanani emotweni yakho, ngayo imoto yakho izokuhlanzwa ngokuphelele, ikugcine uphephile kuwo wonke amagesi ezindaba anobungozi nephunga elibi.
Le modeli enesistimu yokuqapha umoya ehlakaniphile, isebenzisa inzwa ephezulu yokuzwela, ibambe ukungcola komoya ngokushesha nangokuhlaziya. Ikhwalithi yomoya ekhonjisiwe yamanje enenkomba, lapho izinga lokungcola liphezulu, ukukhanya kwenkomba yekhwalithi yomoya kubomvu, umkhiqizo uvula ngokuzenzakalela amandla wokuhlanza ngemodi ezenzakalelayo. Ukukhanya kukhombisa okuluhlaza lapho umoya ulungile. Lapho umoya ulungile ukukhanya kukhanya ngokuluhlaza okwesibhakabhaka. Ukunikeza inqubo ebonakalayo yokuhlanzwa.
Kuhlukile ukusebenza, ukuthinta kwesandla ukuqala, ukumisa nokulawula isivinini samazinga ama-2, okwenza uphephe lapho ushayela, asikho isidingo sokuthola inkinobho yokulawula.
Isihlanzimoyeni / Imoto / AP-C07
Le purifier air cleaner ngokusebenzisa isihlungi se-HEPA nekhabhoni esebenzayo, isusa ama-99% wezinto eziyingozi namagesi, ikwenzele igumbi eliphephile, bese ilandelwa ama-ion aphezulu wokuhlushwa akhipha ukuthuthukisa ikhwalithi yomoya nokwandisa amandla omzimba omzimba.
Futhi iyisihlanganisi, ikwenze ube sendaweni enethezekile. Ungayibeka emotweni noma kudeskithophu, noma yikuphi lapho ungayidinga khona.
Isihlanzimoyeni / Imoto / AP-C04
Lokhu kuhlanza umoya okunesitayela kuhlanza ngokuqinile ukungcoliswa komoya ngokuhlanzwa ngezigaba eziningi. Ihlunga ngempumelelo izinhlayiya ze-PM2.5, izinwele, impova, uthuli nezinye izinto zezinhlayiyana. I-activated carbon layer isusa iphunga nezinto ezinobungozi zamakhemikhali. Futhi kulandelwa ama-PC ayi-15 wezigidi / cm³ukukhipha i-ion ukudala indawo yehlathi emotweni yakho. Ukuhlanzwa kwemoto yonke kukunikeza indawo ephephile futhi enempilo yokushayela, ake uthokozele uhambo olunempilo.
Izibani ezithambile ezithandekayo, nephunga elimnandi. Kungaphezu kokuhlanza umoya.